Horyaalka Premier League ayaa dib loo bilaabi doono 17 juun. - Somgoal
Horyaalka Premier League ayaa dib loo bilaabi doono 17 juun.
yahye - May 28, 2020 0
Horyaalka Premier League Ayaa lagu wadaa inuu dib bilaabmi doono 17 Juun. Waxaa la rajeenayaa in ay ciyaaraan Kooxaha kala ah. Aston Villa vs Sheffield United...
Xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda horyaalada yurub iyo Coutinho leysku heysto
yahye - May 26, 2020 0
Chelsea, Manchester United iyo Leicester City ayaa xiriir lasameeyey wakiilka ciyaariyahanka reer Barcelona Philippe Coutinho si ay sommarka ula wareegaan, lkn Chelsea...
Bayern Muich ayaa hogaanka Bundusligaha sii dheerasatay kadib markii guul cariiri ah ka gaartay kooxda Eintrach Frankfurt, Bayern ayaa ka badisay Frankturt...
Jose Mourinho: “Ma ahayn daneyste goortii Inter Milan ku guuleysatay champions league”
yahye - May 22, 2020 0
Jose Mourinho ´´ inaan danteyda ka fakarin waxay ahayd furaha Inter Milan ay kugu guuleysatay champions league 10 sano ka hor maanta...
Kooxaha Premier League oo isku khilaafsan bilaabashada horyaalka
yahye - May 7, 2020 0
Iyadoo la joojiyay tartanka Horyaalka England, cudurka safmarka ah ee Coronavirus dartiis, ayaa haddana waxaa soo baxaya in xilligan dhow aysan suurogal...
Kubadda Cagta ee Ingiriiska iyo Yurub oo la hakiyay
yahye - March 26, 2020 0
Dhammaan tartamada Kubadda Cagta ee dalka Igiriiska iyo qeybo ka mid ah Qaaradda Yurub ayaa la haliyay, sababo la xiriira cabsida Caabuqa...
Jesse Lingard Oo Wacad Ku Maray In Liverpool ay Darsi Cusub Heli Doonto.
yahye - February 2, 2020 0
Ciyaariyahanka kooxda Manchester United Jesse Lingard ayaa farriin hawada u mariyay kooxdiisa isaga oo u sameeyay balanqaaad weyn oo ah inay ka adkaan doonaan...
yahye - April 10, 2020 0
Ronaldinho waxaa laga siidaayay xabsiga, waxaana la geliyay xabsi guri. Wuxuu weli u xiran yahay dowladda Paraguay. Laacibkan oo sannadkii 2005 ku...
Home Premier league Horyaalka Premier League ayaa dib loo bilaabi doono 17 juun.
Horyaalka Premier League Ayaa lagu wadaa inuu dib bilaabmi doono 17 Juun.
Waxaa la rajeenayaa in ay ciyaaraan Kooxaha kala ah.
Aston Villa vs Sheffield United iyo Manchester City vs Arsenal.
Ciyaaraha laciyaari doono ay ku xiran tahay ogolaanshaha dowlada ingiriiska.
Dhamaan kulamada ayaa dhici doona ayadoo albaabada u xiran waxaana si toos ah loogu baahin doonaa Sky Sports, BT Sport, BBC Sport ama Amazon Prime.
Kulamo buuxo ayaa la ciyaari doona doonaa dhamaadka isbuuca 19-21 Juun.
Waxaa jira 92 kulan oo la ciyaaro doono, Waxaana ugu horeeyo afartaan koox.
Waqtiyada goynta waxay noqon doontaa sida soo socota.
Sabtida: 12:30, 15:00, 17:30 iyo 20:00
Axad: 12:00, 14:00, 16:30 iyo 19:00
Talaadada, Arbacada iyo Khamiista: 18:00 iyo 20:00
Previous articleXanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda horyaalada yurub iyo Coutinho leysku heysto
Bundesligaha jarmalka oo dib u furmaya 16 ka may.
Jesse Lingard Oo Wacad Ku Maray In Liverpool ay Darsi Cusub...